Izindlela eziyi-12 zokuQamba kokuQamba kokuQamba | Martech Zone
Izindlela eziyi-12 zokuQamba kokuQamba kokuBumba
NgoLwesithathu, Okthoba 26, 2011 NgeSonto, Agasti 26, 2012 Douglas Karr
Sibe ne- webinar emangalisayo izolo nge I-PR Newswire futhi Zoomerang, Bangaphezu kuka-1,600 XNUMX abantu ababhalisiwe !!! I-webinar yayiyi-webinar ehlangene ne John O'Connell, umxhumanisi we-PR nezokuxhumana kusuka I-HNTB.
Izindlela eziyi-12 zokudala okuqukethwe okudala:
Qonda i- injongo yezivakashi zakho.
Yeka ukuthengisa futhi nikeza inani kubafundi bakho esikhundleni salokho.
Thola ukuthi amakhasimende akho namathemba afunani!
Yondla izinzwa: umbhalo, umsindo, ividiyo kanye nemidiya exhumanayo.
Yenza izinhlolovo namapholi isu lokuqukethwe eliyinhloko.
Dlulisa umyalezo ofanayo ngezindlela ezahlukahlukene ngalowo nalowo okusha okusha.
Phromotha yilowo nalowo nabathakathi.
Qala umlilo wokuqukethwe! Qala ukusebenzisa infographics.
Nika amandla futhi khuthaza ukwabelana komphakathi… Engeza izinkinobho zomphakathi!
Qaphela futhi uzingele izethameli ezintsha ngokukhuthaza okuqukethwe kwakho.
Linganisa imiphumela bese usebenzisa okusebenza kahle kakhulu.
Kuvukile okuqukethwe okudala uphinde uyisebenzise futhi uyiphinde uyithuthukise!
I-Emailvision yethula ubuhlakani be-imeyili, bezenhlalo nezamakhasimende